Ny toeram-pitrandrahana mpanjaka Solomon (ampahany 21) - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Journal succession > 2017-02 mpandimby ny Magazine > Ny Harenan'i Solomona Mpanjaka (ampahany 21)
"Hametraka ny fiarako miaraka aminao aho", hoy i Tom tamin'ilay mpivarotra. "Raha tsy miverina amin'ny valo herinandro aho dia mety tsy ho velona intsony." Ilay mpiantsena dia nibanjina azy tahaka ireny hoe adala io teo alohany. «Valo herinandro? Tsy ho velona ianao mandritra ny roa herinandro! » Tom Brown jun. dia mpanentana mafana fo. Ny tanjony dia ny hahafantarany raha afaka mitazona azy hatry ny ela any amin'ny tany efitr'i Death Valley - faritra lalina indrindra sy be indrindra any Amerika Avaratra sy ny mafana indrindra eto an-tany izy. Nanoratra izy taty aoriana fa ny toe-javatra any an-tany efitra dia nitaky bebe kokoa taminy noho ny zavatra niainany hatramin'izay. Tsy nangetaheta loatra izy teo amin'ny fiainany. Ny andiany lehibe indrindra misotro rano. Isaky ny alina izy dia nanamboatra fitaovana hisamborana ny ando, ka izany no nanangonany rano madio ampy hosotroina isa-maraina. Tsy ela i Tom dia namoy ny fandaharam-potoana kalandrie ary rehefa afaka sivy herinandro dia nanapa-kevitra izy fa fotoana tokony hody. Nahatratra ny tanjony izy, saingy niaiky fa tsy ho tafavoaka velona raha tsy misy ando.
Impiry ianao no mieritreritra ny ando? Raha toa ahy izany dia tsy matetika loatra - raha tsy hoe tsy maintsy mamafa ny ando amin'ny fitaratry ny fitaratra ianao amin'ny maraina! Fa ny ando dia mihoatra noho ny rotsak'orana eo amin'ny varavarankelin'ny fiaranay (na zavatra miteraka korontana eo amin'ny kianjan'ny cricket)! Mpanome aina Izy. Mamelombelona, ​​manala hetaheta ary mamelombelona. Ataony ho asa kanto ny saha.
Nandany andro maromaro niaraka tamin'ny fianakaviako tamin'ny toeram-piompiana toeram-piompiana nandritra ny fialantsasatry ny fahavaratra. Nifoha maraina izahay matetika ary nandeha nihaza ny raiko. Tsy nanadino ny fahamasinan'ny maraina aho, raha ny tara-masoandro voalohany dia nanao ny ranon-tsaka amin'ny hazo, ahitra ary zavamaniry milentika ary mamirapiratra toy ny diamondra. Ny Cobwebs dia toa toy ny rojo firavaka ary ny voninkazo malazo tamin'ny andro teo aloha dia toa nandihy tamin'ny angovo vaovao amin'ny hazavana maraina.
Mamelombelona sy mamelombelona
Tsy niraharaha ny ando aho raha tsy vao haingana tamin’ny alalan’ny tenin’ny Ohabolana 19,12 nisy hevitra nomena. “Ny henatry ny mpanjaka dia tahaka ny fieron’ny liona; fa ny fahasoavany dia tahaka ny ando amin’ny ahitra.
Inona no fihetsiko voalohany? “Tsy mampanahy ahy ity andalana ity. Tsy mpanjaka aho ary tsy mipetraka eo ambanin’ny mpanjaka koa”. Rehefa avy nieritreritra zavatra hafa aho dia nisy zavatra hafa tonga tao an-tsaiko. Tsy sarotra ny mahita ny fampitahana ny fahafaham-baraka na ny fahasosoran’ny mpanjaka amin’ny fieron’ny liona. Ny fisarihana ny fahatezeran'ny olona (indrindra fa ireo manana fahefana) dia mety mampatahotra - tsy mitovy amin'ny fihaonan'ny Leo tezitra. Ahoana anefa ny amin’ny fahasoavana toy ny ando amin’ny ahitra? Ao amin’ny asa soratr’i Mika mpaminany, isika dia mamaky ny amin’ny olona sasany izay naneho ny tenany ho tsy nivadika tamin’Andriamanitra. “Ho tahaka ny ando avy amin’i Jehovah izy ireo, ary tahaka ny ranonorana amin’ny ahitra” (Mi 5,6).
Namelombelona sy nanavao toy ny vokatry ny ando sy ny orana teo amin’ny zavamaniry ny fitaoman’izy ireo teo amin’ny olona nanodidina azy. Toy izany koa, izaho sy ianao dia andon’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ireo izay mifandray amintsika. Tahaka ny zava-maniry mitroka ando mamelona amin’ny raviny - ary mampamony - dia fomban’Andriamanitra hitondrana ny fiainan’Andriamanitra eto amin’izao tontolo izao isika (1. Johannes 4,17). Andriamanitra no loharanon’ny ando (Hosea 14,6) ary izaho sy ianao no nofidiny ho mpaninjara.
Ahoana no hahatonga antsika ho andon’Andriamanitra eo amin’ny fiainan’ny hafa? Dikan-teny hafa ny Ohabolana 19,12 manampy bebe kokoa hoe: “Ny mpanjaka tezitra dia mahatahotra tahaka ny liona mierona, fa ny hatsaram-panahiny kosa dia tahaka ny ando eny amin’ny ahitra” (NCV). Ny teny tsara dia mety ho toy ny ando miraikitra amin'ny olona sy manome aina (5. Mon 32,2). Indraindray ny hany ilaina dia ny fanomezana kely, ny tsiky, ny fihinany, ny fikasihana, ny ankihibe na ny fikotrokotroky ny fanekena mba hamelombelona sy hamelomana indray ny olona iray. Afaka mivavaka ho an’ny hafa koa isika ary mizara amin’izy ireo ny fanantenana ananantsika ho azy ireo. Fitaovan’Andriamanitra isika amin’ny fanatrehany eo amin’ny asany, ao amin’ny fianakaviantsika, ao amin’ny fiangonantsika – ary amin’ny lalao. Vao haingana i Jack namako no nilaza tamiko ity tantara manaraka ity:
“Telo taona teo ho eo izay niaraka tamin'ny fikambanana bowling teo an-toerana izahay. Ny ankamaroan'ny mpilalao dia tonga tamin'ny 13 p.m. ary nanomboka 40 minitra teo ny lalao. Nandritra io vanim-potoana tetezamita io dia niara-nipetraka sy niresaka ireo mpilalao, saingy nandritra ireo taona vitsivitsy dia nanapa-kevitra ny hijanona ao anaty fiara aho ary hanao fampianarana Baiboly. Raha vao nandray ny basiny ireo mpilalao dia te-hiditra tao aho ary nankany amin'ny maintso-boloky. Volana vitsivitsy lasa izay dia nanapa-kevitra aho fa hanao zavatra ho an'ny klioba fa tsy mianatra. Nitady sahan'asa aho ary nahita asa tany amin'ny faritra mifanohitra. Ny solomaso am-polony dia tsy maintsy nalaina tamina fandroana ary napetraka tao amin'ny hatch; rano, ranomandry sy zava-pisotro mangatsiaka ary koa labiera no atolotra ao amin'ny efitranon'ny klioba. Naharitra antsasaky ny ora, nefa tena nahafinaritra ahy ilay asa. Ireo legioma Bowling dia toerana ahafahanao manafoanana na hampinamana. Mampalahelo ahy fa nisy lehilahy iray nanapaka ny lohanay, ka dia notohizanay ny elanelanay. Na izany aza, azonao eritreretina fa tena gaga aho, ary indrindra fa faly indrindra rehefa nanatona ahy izy ary niteny hoe: 'Ny maha-eto anao dia misy fahasamihafana lehibe ho an'ny fikambanana!'
Izany dia mety ho tsotra nefa mbola manan-danja tokoa. Toy ny ando maraina amin'ny ahitra. Afaka mangina sy tsara fanahy amin'ny fahasamihafan'ny olona nifanerasera taminay isika. Aza atao ambanin-javatra ny fiantraikanyo. Tamin'ny Pentekosta dia nanatanteraka ny mpino 120 ny Fanahy Masina. Izy ireo dia olon-tsotra toa ahy sy ianao ihany, saingy ireo olona ireo ihany no "namadika ny tontolo". Ny ando latsaka latsaka latsaka dia nanenika an'izao tontolo izao.
Misy fomba fijery hafa momba io teny io. Rehefa eo amin’ny toeran’ny manam-pahefana ianao, dia zava-dehibe ny fiheverana izay hataon’ny teny sy ny fihetsikao eo amin’ny mpiara-miasa aminao. Ny mpampiasa dia tokony ho tsara fanahy sy ho tsara fanahy ary hanao ny marina ( Ohabolana 20,28 ). Tsy tokony hampijaly ny vadiny mihitsy ny lehilahy. ( Kolosianina 3,19) ary ny ray aman-dreny dia tsy tokony hanakivy ny zanany amin’ny fanakianana tafahoatra na ny fifehezana be loatra (Kolosianina 3,21). Aoka kosa ianareo ho tahaka ny ando, izay manala hetaheta sy mamelombelona. Aoka ho hita taratra eo amin’ny fiainanao ny hatsaran’ny fitiavan’Andriamanitra.
Nisy nieritreritra teo amin'ny farany. Manompo ny tanjony i Dew - mamelombelona sy manatsara ary manome fiainana. Saingy tsy milofosina ny ando mando rehefa miezaka ny ho tonga iray ianao! Ianao no andon'Andriamanitra raha tsy ao amin'i Jesosy-Kristy ianao. Tsy resaka tetikasa sy paikady akory izany. Spontan spontan, voajanahary. Ny Fanahy Masina dia mamorona ny fiainan'i Jesôsy amin'ny fiainantsika. Mivavaha mba hivoahan'ny fiainanao ny fiainany. Aoka ho ny tenanao irery - ando tondraka kely.